Tonka Gabdhaha Tonka - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Ku soo dhowow Tennis Gabdhaha Minnetonka
FADLAN AKHRIS: Ciyaaraha Fudud ee MHS Ku Noqo Siyaasada Ka Qaybgalka
Ku soo laabashada siyaasada MHS ee Ciyaaraha Fudud waxay ka koobantahay macluumaad muhiim u ah kaqeybgalayaasha iyo daawadayaasha. Fadlan ka akhriso https://docs.google.com/document/d/1P-TWOh7Smxr3b_wlWoyvm51DQeKLTx__riavEGwOmK4/edit?usp=sharing .
Barnaamijkena wuxuu ka kooban yahay Varsity, Junior Varsity team, iyo B Team. Kooxaha Varsity iyo JV waxa ay wada ciyaaraan isla jadwal ay ku wada ciyaaraan hal koox guriga halka kooxda kalena ay ka maqantahay barta ka soo horjeedda. Varsity waa koox la tartameysa oo wada ciyaaraya iskuullo kale oo leh qaab 4 kali ah iyo 3 labanlaab ah iskucelcelis ahaan 7 dhibic ciyaarta. Joogitaanka shirka iyo guulaha aan shirku dhicin waxay saameyn ku yeelanaysaa meelaynta tartanka qaybta. Labada koox iyo tartamada qaybta ka dambeeya xilli-xilliyeedka waxaa loo isticmaalaa inay u-qalmaan tartanka gobolka kaas oo labadaba koox iyo tartammo shaqsiyeed lagu qabto.
Varsity sidoo kale wuu tartami karaa tartamo kooxeedyo badan inta lagu guda jiro xilliga. Tababarayaasha ayaa dooranaya ciyaartooyda ugu sareeya nidaamka iskuulka si ay u soo bandhigaan 14 ilaa 16 varsity team roster iyaga oo adeegsanaya natiijooyinka tartanka tooska ah iyo kormeerayaasha kormeerayaasha heerarka xirfadaha, awooda, iyo baahiyaha kooxda. Tababbarayaashu waxay ku dadaalayaan sidii ay ugu heli lahaayeen kulan kasta ciyaar, inkasta oo marar badan aysan taasi suurta gal ahayn. Sidaasoo kale, tababaruhu wuxuu soo bandhigi doonaa ciyaartoyda ugu fiican dhamaan kulamada.
Junior Varsity wuxuu ka koobnaan doonaa 14 ciyaartooy oo dheeri ah, kuwaa oo qaar ka mid ah ku baran karaan jilicsanaanta oo ay cayaar la yeelan karaan kooxda JV. Kooxda udub-dhexaadka u ah kooxda 'JV' waxay u dhaqmi doonaan sidii koox horumarin ah waxayna ciyaari doonaan kulamo badan intii suurtagal ah. Ciyaartoyda JV waxay inta badan ku ciyaaraan ciyaaro la mid ah jadwalka ciyaarta ee laba dhidib ah sida varsity iyadoo xoogga la saarayo qibrada iyo ka qeybgalka.
Kooxda (B Team) waxay ka koobnaan doontaa ilaa 14 ciyaartoy waxayna ku tartami doonaan jadwal gooni ah kooxaha kale ee la midka ah. Tartankooda wuxuu ka koobnaan karaa pro-set halkii ay ka ahaan lahaayeen 2 of 3 set. Tababarayaashu waxay carrabka ku adkeyn doonaan horumarka iyo horumarka iyadoo ay weheliso horudhac tartamada oo qaab ka yar loo tartamo
Waa rabitaanka tababarayaasha in ciyaartoy kastaa uu helo khibrad waxbarasho oo raaxo leh. Waxaan kuu rajeyneynaa sida ugu fiican oo aan kugu martiqaadeynaa inaad gacan ka geysato sidii kooxaha sannadkan looga dhigi lahaa kuwa ugu wanaagsan weligood!
Macluumaadka Guud ee Tennis-ka Gabdhaha 2017
Marka lagu daro waraaqaha guud ee macluumaadka, halkan waxaa ku yaal faahfaahino gaar ah kooxda iyo xilli ciyaareedka.
Cusboonaysii! Dhamaan Kooxaha 2017 Tijaabooyinku waxay bilaabmayaan Ogast 14 iyadoo 9 subaxnimo lagu kulmayo Madasha oo ay ku xigto jadwalka tijaabinta sida ku xusan:
10 subaxnimo ilaa 1 galabnimo - Dhamaan dadka soo celiya Varsity-ka ayaa u wargaliya maxkamadaha si ay u bilaabaan ciyaarta tijaabada / RR.
2 pm ilaa 3 pm - Dhamaan cayaartoyda kale waxay iska xaadiriyaan maxkamadaha si ay ugu kuur galaan oo ugu meeleeyaan robin wareega ah.
3 ilaa 5 galabnimo - Dhamaan ciyaartooyda loo xilsaaray Blue RR dib ayey uga soo warbixi doonaan bilowga tartanka RR.
1 pm ilaa 2 pm - Dhamaan cayaartoyda JV soo celinta iyo martiqaadyada lagu dhawaaqay warbixinta kulanka maxkamadaha si ay ugu kuur galaan una xaqiijiyaan meeleynta wareega wareega .
Download Tryout Schedule ku Caddaynay & Info halkan ama booqasho / Uploaded / images / MHS / Ath ... ..
Download ee Gabdhaha 2017 Tennis Info Packet halkan ama booqo https: //www.minnetonkasc ...
Tababbarka: Varsity iyo JV waxay ku tababbari doonaan 3:00 PM ilaa 4:45 PM M - F maalmaha aan ciyaarta la ciyaari doonin. Kooxaha B waxay tababbarayaan 4:45 ilaa 6:15 PM maalmahan. Waxqabadka Sabtida waxaa lagu dhawaaqi doonaa toddobaadle.
Ciyaaraha: Ciyaaraha gurigu badanaa waxay bilaabmaan inta udhaxeysa 3:40 iyo 4:00 PM iyadoo kuxiran masaafada loo baahan yahay in la safro.
Kharashka Kaqeybgalka = $ 75 (waxaa la bixiyaa kaliya hal jeer sanadkii)
Khidmadda Waxqabadka Tennis = $ 85 (waxaa la bixiyaa xilli kasta)
Guji si aad u diiwaangeliso !
Qiimaha Ikhtiyaariga ah: Dhar ikhtiyaariga ah sida dhididka iyo dhididka ayaa ku dhawaad $ 60
Gadiid: Dhamaan kooxaha badanaa waxay raacaan basaska kulamada. Basasku waxay ka baxaan dhinaca Koonfur Bari ee Dugsiga Sare sida ku xusan jadwalka.
Kabtanku wuxuu mas'uul ka yahay safka ugu horreeya ee isgaadhsiinta ee u dhexeeya ciyaartoyga iyo tababarayaasha. Waxay la shaqeyn doonaan tababbarayaasha leh cabbir isku mid ah iyo qaabeyn waxayna abaabuli doonaan lacag aruurin iyo diyaafad kooxda dhamaadka dhamaadka xilli ciyaareedkan. Waxay u noqon doonaan kuwo lagu daydo kooxda.
Waaliddiinta 'kabtanka' ayaa gacan ka geysan doona abaabulka xafladaha kooxda.
Abaalmarinada guud waxaa loogu talagalay All-Conference, Kabtanka, inta badan la wanaajiyay, Diiwaangelinta ugu Fiican (Single iyo double) iyo abaalmarino gaar ah oo kala duwan.
Soo dejinta tilmaamaha iyo rajooyinka
Dhamaan ciyaartooyda sameynaya kooxda varsity tartamada waxay heli doonaan warqad varsity hadii ay:
U hoggaansan dhammaan sharciyada iyo xeerarka MSHSL ee gobolka
Ka soo qeybgal dhammaan dhaqamada iyo cayaaraha oo ku xiran kaliya jirro iyadoo ogeysiis maalinle ah la siiyo macalinka
Muuji xirfadda habboon ee cayaaraha iyo hoos u dhigista maxkamadda iyo dibaddeeda
Sii dadaalkooda ugu fiican waxqabadka iyo cayaaraha oo muuji dabeecad wanaagsan
Xeerarka & Filashooyinka:
Imaw jimicsi 10 ilaa 15 daqiiqadood horaad oo sameey fidin shaqsiyeed
Xiro lebbis ku habboon (tababbaraha la oggolaaday) labiska inta lagu gudajiro (Waa sharciga tababaraha in dhammaan ciyaartoydu ay xirtaan funaanado, gaagaab ama funaanad, oo ay u labistaan dharka ku habboon cimilada, oo ay isu soo bandhigaan hab ixtiraam leh inta lagu gudajiro waxqabadka
Ciyaartoyda aan ku tababaran doonin jirro darteed waa inay soo wacaan tababaraha maalinta maqnaashada ay sheegaan nooca cudurka iyo sababta aysan u awoodi doonin inay xaadiraan tababarka
Ciyaartoyda waa laga raalligalin doonaa jimicsiga inta lagu jiro fasaxa gu'ga laakiin waa inay siiyaan macalinka ogeysiis waalidka
Ciyaartoyda waa inay xirato yunifoom koox marka ay ciyaarayaan iyo tartamada
Ciyaartoygu waa inay had iyo jeer ula dhaqmaan asaagayaashooda iyo tababarahooda si xushmad leh
Ciyaartoyda waa inay siiyaan dadaalkooda ugu fiican marwalba
Tababarayaasha ma dejinayaan filashooyinka meeleynta shirka ama gobolka - wax qabadkeenna waxay noqon doonaan mid ka tarjumaya kartideena iyo xaddiga dadaalkeena iyo hamiga aan u leeyahay ciyaarta teniska - waxa kaliya ee loo baahan yahay waa inaad sida ugu fiican u sameyso maalin kasta. , hagaajiso intii suurta gal ah, kuna raaxeyso xaqiiqda ah inaad sameysay waxyaabahaas
Ogeysiis Gaar ah: Siyaasadda isboorti ee dhawaanta la qaatay waxay sheegaysaa in kabtan kasta oo ku xadgudba Xeerarka Isticmaalka Kiimikada ee Dugsiga Sare ee Gobolka uu lumi doono maqaamka kabtanka xilliyeed.
KOOXAHA LAGU SAMEEYO
Tababaraha Madaxa Varsity